DIY DIY | Ngeentlanzi
Njengayo yonke into kobu bomi, ii-aquariums zinokutshintshwa ngabanini bazo. Masithi sinokwenza I-aquarium diy ngokunxulumene nomnqweno wethu wokuyiguqula ukonwabela ubuninzi kunye nesitayile sethu se-aquarium nganye.
Kule ndawo uya kufumana zonke iintlobo zeengcebiso, izixhobo, izixhobo kunye neenkcukacha Ukuthathela ingqalelo ukonwabela i-DIY ekhuselekileyo eyi-XNUMX% ye-aquarium, okanye ubuncinci ukuya kuthi ga kwelona liphezulu ukuze kuthi iintlanzi, iifudo, izilwanyana eziphila emanzini nasemanzini okanye izilwanyana ezingenamqolo ulonwabele kakhulu ikhaya lakho.
Ungalibali ukuba intlanzi nganye ifuna iimfuno zayo kwaye kufuneka sithathele ingqalelo iinkcukacha ezininzi zokulungisa i-aquarium nganye kwiimfuno zohlobo ngalunye.
Ulwazi ngamandla kwaye kuhlala kulungile ukukhangela kunye nokuthelekisa ukuze ungaphazami.
por UNatalia Cerezo yenzayo Iinyanga ze8 .
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-silicone yee-aquariums sisiseko esimele ukuba sibe naso nakuphi na ukuhla, oko kukuthi, ukuba ...
Omnye wemibuzo esisiseko ebuzwe ngabo bonke abafuna ukuqala kwihlabathi ...
Kubalulekile ukuthathela ingqalelo umgangatho wokukhanyisa kwi-aquarium, ngakumbi ukuba sinezityalo, ukuze ...
Xa ukhetha i-aquarium asisoloko sisazi ukuba loluphi uhlobo olulungele iimfuno zethu. Ewe…
Izinto zokuhombisa, ezinje ngamatye kunye namatye, kufuneka zikholise iliso kwaye zilungele ...
Enye indlela yokutshintsha amanzi e-aquarium
por UIldefonso Gomez yenzayo 7 iminyaka .
Nangona ukutshintsha amanzi kwi-aquarium yinkqubo elula, inyani ayisiyiyo yonke loo nto ...
Zininzi izihlandlo apho siqwalasele iitanki zentlanzi okanye ii-aquariums apho ...
Ukwakha i-Aquarium yakho yetyuwa
por UViviana Saldarriaga yenzayo 10 iminyaka .
Njengoko besesitshilo ngaphambili, omnye wemibuzo enyanzelekileyo yabo bantu banomphefumlo we-aquarist, ingaba ...
Xa sine-aquarium, akufuneki sicinge kuphela ngobungakanani bephuli, iintlanzi esiya kuzo ...
Ukuhombisa i-Aquarium ngeLimestone
Njengoko sibonile ngaphambili, nangona abantu abaninzi bengakholelwa, umhombiso kwi-aquarium yinxalenye ebaluleke kakhulu ...